အထက်ပါ အစီအစဉ် နှစ်မျိုးလုံးကို MyTelenor နဲ့ WowBox အက်ပလီကေးရှင်း များမှ တဆင့်လည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ကြည့်ဆိုတာကတော့ လစဉ်ကြေး အပတ်စဉ်ကြေးများ ထပ်မံပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ မြန်မာပြည်မှာ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဗီဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် မိမိအနှစ်သက်ဆုံး ဗီဒီယိုများကို ဒေတာဖိုးအသက်သာဆုံးဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်အနှစ်သက်ဆုံး ဗီဒီယိုများကို အောက်ပါအပလီကေးရှင်းများမှာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
ဒေတာဖိုးအသက်သာဆုံး ၁MB ကို ၁ကျပ်
ဇာတ်ကားတွေအတွက် ဘာလစဉ်ကြေး၊ အပတ်စဉ်ကြေးမှ ထပ်ပေးရန်မလို
Viu အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ရှိသမျှရုပ်ရှင်ကား၊ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်တွေအားလုံးကို Viu ပရီမီယမ်ဖိုး လစဉ် ကျပ် ၅၀၀၀ ပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့် အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ဗီဒီယိုတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်
MyanFlix အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ရှိသမျှရုပ်ရှင်ကားတွေအားလုံးကို ဇာတ်ကားဖိုးပေးရန်မလိုဘဲ အခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့် အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ဗီဒီယိုတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်
WowPlay အက်ပလီကေးရှင်းထဲက မြန်မာကားများ၊ စာတန်းထိုးမှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ၊ ဗီဒီယိုရုပ်သံအတိုအထွာတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်
MRTV4 ၊ Channel7နဲ့ မဟာဗောဓိ ရုပ်သံလိုင်းတွေကို တိုက်ရိုက်ပဲကြည့်ကြည့်၊ Replay ပဲကြည့်ကြည့် ၁MB ကို ၁ကျပ်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်
တိုက်ရိုက်ပွဲစဉ်များအပါအဝင် ONE Championship ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးကို ၁MB ကိုမှ ၁ကျပ်တည်းသာကျသင့်မယ့်ပုံစံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်
ကိုယ်ဖန်တီးသစ်လွင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို ချပြဖို့ ဒါမှမဟုတ် သူများ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးအတိုအထွာလေးတွေကို ကြည့်ဖို့ TikTok အက်ပလီကေးရှင်းကို ၁MB ကိုမှ ၁ကျပ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ခွင့်
YouTube ထဲကနေ နည်းပညာဆိုင်ရာများ၊ ဒေသန္တရဗဟုသုတများ၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်စတဲ့ များပြားလှတဲ့ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်နဲ့ တဝကြီး ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်
"စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်က ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ ကိုက်ညီလဲ?
ဒေတာဖိုး ၁MB ကိုမှ ၁ကျပ်တည်းနဲ့ ဖော်ပြပါ ရုပ်ရှင်ကြည့် အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုချင်းစီရဲ့ လစဉ်ကြေး၊ အပတ်စဉ်ကြေးတွေ ထပ်ပြီး ပေးစရာမလိုဘဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဗီဒီယိုတွေကို အားရပါးရ ကြည့်ချင်သ
သင့်အတွက် ဖျော်ဖြေရေးဆိုတာ ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်တာပဲလို့ ခံယူထားသူ
သင်ဟာ ဗီဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်းတွေထဲက ဗီဒီယိုတွေကို အမြဲကြည့်ရင်း နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ပြန်လည် အသုံးချတတ်သူ
သင်ဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ၀ါသနာပါတဲ့သူ
သင်ဟာ အခုဖော်ပြထားတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုခုကို အသုံးပြုနေသူ
အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်
MyanFlix ဆိုသည်မှာ မြန်မာဗီဒီယိုနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းများကို တစ်နေရာတည်းမှာ ဒေါင်းလုပ် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
WowPlay ဆိုသည်မှာ တယ်လီနော အသုံးပြုသူများအတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ မြန်မာစာတန်းထိုးမှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ၊ ဗီဒီယိုရုပ်သံအတိုအထွာများကို မိမိဖုန်းကနေတဆင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ Mobile Phone နဲ့ Tablet တွင် Pyone Play Application ကို အသုံးပြုပီး MRTV-4 နဲ့ Channel7က မကြည့်လိုက်ရတဲ့ အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် MRTV-4, Channel7နဲ့ မဟာဗောဓိ ရုပ်သံလိုင်းတွေကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရန် - “PyonePlay Facebook Page”
ONE Championship ရဲ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ mixed martial arts (MMA) ၊ Muay Thai ၊ kickboxing ၊ boxing ၊ Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) စတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာအပြင် ONE Championship ရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေအကုန်လုံးကိုတစ်နေရာတည်းမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပရိသတ်အချစ်တော် Aung La "The Burmese Python" N Sang (အောင်လ)၊ Phoe "Bushido" Thaw (ဖိုးသော်)စတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမိမိရဲ့ဖုန်းလေးပေါ်ကတဆင့်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရန် https://www.onefc.com
YouTube ဆိုသည်မှာ ဗီဒီယိုဖိုင် အတိုအထွာများအား အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်သော အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း အက်ပလီကေးရှင်းထဲတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာများ၊ ဒေသန္တရဗဟုသုတများ၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်များအား အများဆုံးတွေ့နိုင်ပြီး လူငယ်များအား လူမှုဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတများစွာကို ပေးနိုင်သော ဗီဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကိုယ့်အကြိုက် Viu ၊ MyanFlix ၊ WowPlay ၊ PyonePlay ၊ One Championship ၊ TikTok နဲ့ YouTube အက်ပလီကေးရှင်းတွေထဲက ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ဖို့ ၁MB ကို ၁ကျပ်သာကျသင့်မယ့် အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဗီဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်းတွေထဲက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအတွက် ဘာလစဉ်ကြေး၊ အပတ်စဉ်ကြေးမှ ထပ်ပေးစရာမလိုတဲ့အပြင် ဒေတာဖိုးအသက်သာဆုံးနဲ့လည်း ကြည့်လို့ရတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ (အသေးစိတ် - Viu အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ရှိသမျှရုပ်ရှင်ကား၊ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်တွေအားလုံးကို Viu ပရီမီယမ်ဖိုး လစဉ် ကျပ် ၅၀၀၀ ပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့် နှင့် MyanFlix အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ရှိသမျှရုပ်ရှင်ကားတွေအားလုံးကို ဇာတ်ကားဖိုးပေးရန်မလိုဘဲ အခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်)
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ကို ဘယ်လို ရယူနိုင်မလဲ?
စိတ်ကြိုက်ကြည့် အစီအစဉ်ကို ရယူရန်
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အပတ်စဉ် - ၄၉၉ကျပ် (*7799*1# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်)
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ကို ရယူမယ်ဆို ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲ?
စိတ်ကြိုက်ကြည့် အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကို ရယူပါက ၄၉၉ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး အလိုအလျှောက်သက်တမ်းတိုးမည်မဟုတ်သောကြောင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပါက သုံးစွဲသူမှ ပြန်လည်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
၀ယ်ယူပြီးနေ့အပါအဝင် ၇ ရက်မြောက်နေ့၏ ည၁၂နာရီအထိသက်တမ်းရှိပါတယ်။
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်နဲ့ အခြား ဒေတာပတ်တွေနဲ့ တွဲခံစားလို့ရလား?
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်နဲ့ အခြားဒေတာပတ်တွေ တွဲခံစားလို့ မရပါ။ အခြားဝယ်ယူထားသော ဒေတာပတ်တစ်ခုရှိနေပါက သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ပတ်ထဲက အရင်ဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပတ်ထဲကဒေတာများကုန်မှသာလျှင် ၁MB ကို ၁ကျပ်နဲ့ လက်ကျန်ငွေထဲက စတင်ဖြတ်တောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် “စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ် ၀ယ်ယူထားစဉ်ကာလအတွင်း အစီအစဉ်တွင်ပါ၀င်ထားသော သတ်မှတ်အက်ပလီကေးရှင်းများရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအတွက် ပေးရသော လစဉ်ကြေး၊ အပတ်စဉ်ကြေးများကတော့ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ “စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ထဲမှာ ဘယ် အက်ပလီကေးရှင်းတွေ ပါ၀င်နေလဲ?
လက်ရှိ “စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်တွင် Viu ၊ MyanFlix ၊ WowPlay ၊ PyonePlay ၊ TikTok နဲ့ YouTube စတဲ့ ဗီဒီယို အက်ပလီကေးရှင်းတွေ ပါ၀င်ပါတယ်။
VIU ဆိုတာ ဘာလဲ?
အက်ပလီကေးရှင်းကို ရယူရန် အန်းဒရွိုက်အတွက် “Playstore”
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင် VIU မှာ ဘယ်လို ခံစားခွင့်တွေ ထပ်ပြီး ရနိုင်လဲ?
Viu အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ရှိသမျှရုပ်ရှင်ကား၊ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်တွေအားလုံးကို Viu ပရီမီယမ်ဖိုး လစဉ် ကျပ် ၅၀၀၀ ပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်နဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ဗီဒီယိုတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်သာ ကျသင့်တဲ့ပုံစံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက “MyanFlix Facebook Page” တွင် ၀င်ရောက် မေးမြန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင် MyanFlix မှာ ဘယ်လို ခံစားခွင့်တွေ ထပ်ပြီး ရနိုင်လဲ?
MyanFlix အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ရှိသမျှရုပ်ရှင်ကားတွေအားလုံးကို ဇာတ်ကားဖိုးပေးရန်မလိုဘဲ အခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်နှင့် အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ဗီဒီယိုတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်သာ ကျသင့်မယ့် ပုံစံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
WowPlay ဆိုတာ ဘာလဲ?
အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက “WowPlay Facebook Page”တွင် ၀င်ရောက် မေးမြန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင် WowPlay မှာ ဘယ်လို ခံစားခွင့်တွေ ထပ်ပြီး ရနိုင်လဲ?
WowPlay အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ဗီဒီယိုတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်သာ ကျသင့်မယ့် ပုံစံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
PyonePlay ဆိုတာ ဘာလဲ?
မိမိတို့ရဲ့ Mobile Phone နဲ့ Tablet တွေမှာ Pyone Play Application ကို အသုံးပြုပြီး MRTV-4 နဲ့ Channel7က မကြည့်လိုက်ရတဲ့အစီအစဉ်ကို ပြန် လည်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် MRTV-4, Channel7နဲ့ မဟာဗောဓိ ရုပ်သံလိုင်းတွေကို အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေးတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းကို ရယူရန် အန်းဒရွိုက်အတွက် “Playstore” iOS အတွက် “App Store”
အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက “PyonePlay Facebook Page” တွင် ၀င်ရောက် မေးမြန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင် PyonePlay မှာ ဘယ်လို ခံစားခွင့်တွေ ထပ်ပြီး ရနိုင်လဲ?
PyonePlay အက်ပလီကေးရှင်းထဲက ရုပ်သံအစီအစဉ်နဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်သာ ကျသင့်မယ့် ပုံစံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ONE Super App ဆိုတာဘာလဲ?
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်နဲ့ဆိုရင် ONE Championship မှာ ဘယ်လိုခံစားခွင့်တွေ ထပ်ပြီး ရနိုင်လဲ?
တိုက်ရိုက်ပွဲစဉ်များအပါအဝင် ONE Championship ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးကို ၁MB ကိုမှ ၁ကျပ်တည်းသာကျသင့်မယ့်ပုံစံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
TikTok ဆိုတာ ဗီဒီယိုအတိုအထွာပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု (အက်ပလီကေးရှင်း) ပါ။ စမတ်ဖုန်းပေါ်ကနေ တီထွင်ဆန်းသစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေနိုင်သလို ကိုယ့်စိတ်ပျော်ရာ ဖန်တီးသစ်လွင်ထားတဲ့ အရာတွေကို ဗီဒီယိုလေးတွေကဆင့် ချပြနိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းရပ်ဝန်းလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အက်ပလီကေးရှင်းကို ရယူရန် အန်းဒရွိုက်အတွက် “Playstore” နှင့် iOS အတွက် “App Store”
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင် TikTok မှာ ဘယ်လို ခံစားခွင့်တွေ ထပ်ပြီး ရနိုင်လဲ?
ကိုယ်ဖန်တီးသစ်လွင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို ချပြဖို့ ဒါမှမဟုတ် သူများ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးအတိုအထွာလေးတွေကို ကြည့်ဖို့ TikTok အက်ပလီကေးရှင်းကို ၁MB ကိုမှ ၁ကျပ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
YouTube ဆိုတာ ဘာလဲ?
YouTube ဆိုသည်မှာ ဗီဒီိယိုဖိုင် အတိုအထွာများအား အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်သော အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်း အက်ပလီကေးရှင်းထဲတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာများ၊ ဒေသန္တရဗဟုသုတများ၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်များအား အများဆုံးတွေ့နိုင်ပြီး လူငယ်များအား လူမှုဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတများစွာကို ပေးနိုင်သော ဗီဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းကို ရယူရန် အန်းဒရွိုက်အတွက် “Playstore” နှင့် iOS အတွက် “App Store”
“စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင် YouTube မှာ ဘယ်လို ခံစားခွင့်တွေ ထပ်ပြီး ရနိုင်လဲ?
YouTube ထဲကနေ နည်းပညာဆိုင်ရာများ၊ ဒေသန္တရဗဟုသုတများ၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်စတဲ့ များပြားလှတဲ့ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတွေကို ၁MB ကို ၁ကျပ်နဲ့ တဝကြီး ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ “စိတ်ကြိုက်ကြည့်” အစီအစဉ်တွင် YouTube ၊ Viu ၊ MyanFlix ၊ PyonePlay နဲ့ WowPlay စတဲ့ ဗီဒီယို အက်ပလီကေးရှင်းတွေ ပါ၀င်ပါတယ်။